विश्वलाई मास्कको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री ओली – Online Bussiness Khabar
विश्वलाई मास्कको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री ओली
२०७७ आश्विन १०, शनिबार १०:४७
काठमाडौं, असोज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वलाई पारमाणविक हतियार भन्दा मास्कको आवश्यकता परेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभामा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले संसारलाई अहिले बन्दुक भन्दा पनि बढी मास्क चाहिएको भन्दै यसमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सन् २०१९ मा विश्वको कुल सैनिक खर्च १ दशमलव ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको भन्दै यसको सानो अंशले गरिब र अभावमा पिल्सिएका लाखौँ मानिसलाई राहत मिल्ने उहाँको जोड छ ।
डा. केसीका समर्थकमाथि लाठी चार्ज
आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा गृहकार्य सुरु
काठमाडौं महानगरमा १० हजार संक्रमित ! सबैभन्दा बढी १५ नम्बर वडामा
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएका युवकको पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ